ThutaStar - Page2of 620 - Welcome From ThuTaStar
မပို့ဖြစ်လိုက်သော လစာငွေလေး သို့…..အမေ အမေတို့ မိသားစုတွေ နေကောင်းကြလါး?သားလဲကျန်းမာစွာဖြင့် တိုင်းပြည်တါဝန်တွေကို ဦးလည်မသုန် ထမ်းဆေါင်နေပါတယ် အမေ…. ညီလေးနဲ့ညီမလေး စာတွေကောလိုက်နိုင်ရဲ့လါးအမေ…. ကျနော်က သားကြီးသြရသ ဖြစ်ပီး အမေတို့နဲ့ ခွဲခွာသွားရတါကို အပစ်မတင်ပါနဲ့နော် အမေ….. သား အမေဆီ လစာမှန်မှန်ပို့ပေးတယ်နော ်အမေ…. ဒီတခေါက် ရှေ့တန်းပြန်ဝင်ရင် […]
မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးအတြက္ (၁၆)ရက္မွ ၊ (၂၃)ရက္အတြင္း ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ ယၾတာျပဳရန္ (၁)ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း
မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးအတြက္ ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလ (၁၆)ရက္မွ ၊ (၂၃)ရက္အတြင္း ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ ယၾတာျပဳရန္ (၁)ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း အကြၽႏ္ုပ္၏ ဣဌသေဘာေဆာင္သည့္ ေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား မွန္ကန္၍ ၊ အနိဌသေဘာေဆာင္သည့္ မေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲမွားပါေစသတည္း။ …. […]
စနေသားသမီး​တွေဟာ များ​သောအားဖြင်​့ စိတ်​သ​ဘောထားပြည်​့ဝကြတယ်​….စိတ်​ထား​ကောင်​းကြတယ်​… သင်​ဟာ စနေသားသမီးနဲ့ ချစ်​သူဖြစ်​​နေပီဆိုရင်​ ဂုဏ်​ယူလိုက်​ပါ​တော့….သူတို့ကိုလက်​လွှတ်​ဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့… စနေသားသမီး​တွေက သူ့ရဲ့ချစ်​သူကို ​ပျော်​ရွှင်​​အောင်​ထားကြတယ်​…သူ့ချစ်​သူကို စိတ်​ညစ်​​စေမယ်​့အပြုအမူမျိုးကို လုပ်​​လေ့မရှိဘူး။ တကယ်​လို့ သူ့ချစ်​သူက အ​ကြောင်​းတစ်​ခုခု​ကြောင်​့စိတ်​ညစ်​​နေရင်​လည်​း ​ပျော်​ရွှင်​လာ​အောင်​လုပ်​​ပေးတတ်​ကြတယ်​…. ဒါကလည်​းသူတို့ရဲ့ဗီဇလို့​ပြောရမှာ​ပေါ့….စနေသားသမီး​တွေက နည်​းနည်​း​တော့စိတ်​ကြီးကြတယ်​…. သူတို့ကို မဟုတ်​တာ​​ပြောရင်​ မကြိုက်​ကြဘူး…..စတာပဲဖြစ်​ဖြစ်​ အတည်​​ပြောတာပဲ ြ​ဖစ်​ဖြစ်​ မကြိုက်​ကြဘူး….. ဒါပေမယ်​့ […]
ဝင်ငွေမပြတ်စေသော ဂမ႓ီရပိုက်ဆံအိပ်ပြုလုပ်နည်း မိတ်ဆွေအပေါင်း မင်္ဂလာပါဗျာ…။ မိမိအမြဲတစေ အသုံးပြုနေကျ ပိုက်ဆံအိပ်လေးတွေကို… အောက်က လာဘ်ပွင့်စေသောဓါတ်အရောင်များဖြင့် အသုံးပြုပေးပါ…။ ထူးခြားသိသာစွာ ဝင်သမျှငွေမြဲစေတယ်… လာဘ်ပွင့်စေပြီး ဝင်ငွေတိုးစေတယ်… ငွေကြေးအခက်အခဲတွေ ကင်းလွတ်စေတယ်ဗျာ…။ ဘာမှ အပန်းမကြီးပါဘူးဗျာ …လုပ်ကြည့်ပါ။ မိမိနေ့နံနဲ့ သင့်တော်တဲ့လာဘ်ပွင့်အရောင် ပိုက်ဆံအိပ်လေးထဲ ဖာလာစေ့၁စေ့ အမြဲတစေ ထည့်ထားပြီး […]